दासता विरुद्धको विद्रोह अब कसैले रोकेर रोक्न नरुक्ने बताए , लक्ष्मण थारु - RanaTharu
दासता विरुद्धको विद्रोह अब कसैले रोकेर रोक्न नरुक्ने बताए , लक्ष्मण थारु
कैलाली, १५ फागुन । थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका केन्द्रिय संयोजक लक्ष्मण थारुले दासता विरुद्धको विद्रोह कसैले रोकेर पनि रोकिने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।
शनिबार कैलालीको हसुलियामा भएको ‘शान्ति सद्भाव न्याय र अधिकारको लागि दासता विरुद्धको थरुहट थारुवान विशेष राष्ट्रिय सम्मेलन’ मा आफ्नो भ्वाइस रेकर्ड गरि सम्बोधन गर्दै संयोजक थारुले दासता विरुद्धको विद्रोह अब कसैले रोकेर रोक्न खोजे पनि नरुक्ने बताए ।
संयोजक थारुले भने–‘उच्च अदालत दिपायलले नश्लीयपूर्ण, पूर्वाग्राही, गद फैसला सुनाएर जन्मकैदको फैलाला सुनाएको छ, आज यो सभामा यो विशेष राष्ट्रिय सम्मेनल हुँदै गर्दा थुप्रै सिआइडी पठाएर, प्रशासन पठाएर मलाई यो मञ्चमा आउनबाट वञ्चित गराइएको छ । आज मलाई गिरफ्तार गर्ने आदेश छ, हत्कडी लगाउने आदेश छ, आज मलाई जेलमा हाल्ने आदेश छ ।
बाध्यताबस म यो मञ्चमा आउन सकेन । विश्वास छ यो सम्मेलन भव्यताका साथ सफल हुने छ ।’
उनले अगाडी थपे–‘हामी थारुहरुले लेख्दा खेरि, बोल्दा खेरि, संगठित भेला हुँदा खेरि र सम्मेलन गर्दा खेरि यो देशका शासकहरुले आतंककारी भन्छन्, ज्यानमारा भन्छन्, हामीलाई लुटेरा डाँकाको व्यवहार गर्छन् । नेपाली नागरिकको व्यवहार गर्दैनन् । र हामीलाई बोल्नबाट वञ्चित गर्छन् ।
तर अब रोकिदैन् । यो हाम्रो भेला संगठन, हाम्रो एकता, हाम्रो अभियान र हाम्रो आन्दोलन दासता विरुद्धको विद्रोको तयारी रोकिदैँन, कसैले रोकेर पनि रोकिने छैन । प्रशासनको धाक धम्की त्रास हामीमाथिको झुठा मुद्धा, सांसद रेशम चौधरीमाथिको जन्मकैदको फैसला हामी मान्न तयार छैनौँ ।’
सम्बोधनकै क्रममा संयोजक थारुले अगाडी थपे–‘हामी बोलेम, हामी अपराधी होइनौं, ज्यानमारा होइनौं हामी यो देशमा सदभाव विगार्ने जत्था होइनौं ।
हामी यो देशको आदिवासी धर्तीपुत्र हौँ । यो देशको सबभन्दा इमान्दार समुदाय हौँ । टीकापुर घटना थारुले घटाएका होइन । हामी मात्र बोलिरहेका छैनौ, नेपाली कांग्रेस, नेकपा, जसपा लगायत थारुहरुले बोलिरहेका छन्, स्वतन्त्र व्यक्तिहरुले बोलिरहेका छन् । थारु माथि झुठा मुद्धा लगाइरहेका छन् ।’
संयोजक थारुले सम्मेलनमा आफू भौतिक रुपमा उपस्थित हुन नसके पनि लिम्बु देखि मगरात र खसान देखि दलित अभियान्तालाई जुर्मुराएको देखेर आफु खुशी रहेको बताए । साथै संयोजक थारुले अबको आन्दोलनमा लिम्बुवान, खम्बुवान, ताम्सालिङ, मगरात, नेवा, दलित र अन्य पार्टीहरु संगठित र मोर्चा बन्दी मात्रै नभएर सशक्त आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिए ।
पूर्वमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. गोपाल दहितले टीकापुर घटना राजनीतिक घटना भएपनि थारुमाथि दमन गरी राज्यले निर्दोष थारुलाई पक्राउ गरी मुद्दा लगाएको टिप्पणी गरे । तत्कालिन सरकारले टीकापुर घटना राजनीतिक आन्दोलन हो भन्दै मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेपनि कार्यान्वयनमा नआएको बताए । टीकापुर घटनामा पीडितका लागि साढे १३ करोड रुपियाँ क्षतिपूर्तिको निर्णय आफू सरकारमा रहँदा गराएको पनि उनले चर्चा गरे ।
थरुहट थारुवान मोर्चाले उठाएको मुद्दा सम्बोधनमा आफ्नो साथ समर्थन रहेको भन्दै डा. दहितले भने, “पार्टीभित्र अन्तरसंघर्ष गर्दै टीकापुर घटनालाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर जेलबन्दीलाई रिहाई गराउनुपर्छ ।” पहिचान पक्षीय सबैसँग सहकार्य गरी राज्यलाई दवाव दिनुको विकल्प नभएको उहाँले बताए ।
मोर्चाका केन्द्रीय प्रवक्ता मिनराज थारुले वर्तमान संविधानले थारुमाथि विभेद कायमै राखेकाले संशोधन नगरेसम्म चुप लागेर नबस्ने बताए । थारुमाथि राज्यले सदियौंदेखि विभेद गर्दैआएकाले अव चुपलागेर नबस्ने, विभेदको पर्खाल भत्काएरै छाड्ने चेतावनी दिए ।
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले थरुहटको आन्दोलनमा लिम्बुवानको साथ रहेको बताए । टीकापुर घटना अरुले रचेको षडयन्त्र भएकाले थारुलाई दुःख दिन नमिल्ने उनले बताए । टीकापुर घटनालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरी त्यसको पर्दाफास गर्नुपर्ने पर्ने बताए । टीकापुर घटनामा पक्राउ परी कारागारमा रहेका सबै थारुलाई विना शर्त रिहाई गर्न उनले माग गरे ।
नेपाल आदिवासी जनजातिका पूर्व महासचिव आङकाजी शेर्पाले पञ्चायतकाल देखि थारु कल्याणकारिणी सभा संघीयताको कुरा उठाएको चर्चा गरे । त्यही मुद्धा उठाउँदा खेरि थारुहरुको पहिचानको आधारमा थरुहट थारुवान प्रदेश चाहियो भन्दा खेरि प्रदेश नदिने र त्यही थारुहरुलाई उसको आदिमभूमिबाट निकाल्नका लागि बाँके बर्दिया निकुञ्ज खोल्ने, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज खोल्ने शेर्पाहरुको आदिभूमिमा सागरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज राखेको अरोप लगाए । उनले पूर्व मेची देखि पश्चिम महाकालीसम्म बसोबास रहेका थारु समुदायको युवाहरुको सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने बताए ।
मगरात संघर्ष समितिका संयोजक राम मगरले अव पार्टीभन्दा माथि उठेर जातीय सचेतना आवश्यक रहेको बताउनुभयो । पार्टीभित्र लागेर योगदान दिंदा पनि आदिबासी जनजातिको भलाई नभएको भन्दै उहाँले अव जातीयरुपमा अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री रामजनम चौधरी, जसपाका राजेन्द्र महतो, भानुराम चौधरी, मोर्चाका सल्लाहकार गणेशमान महतो, प्रभा चौधरी लगायतले धारणा राखेका थिए ।